देउवा सरकारले राज्यकोषबाट कार्यकर्तालाई ८ करोड वितरण गर्दै, किन ?
ARCHIVE, POLITICS » देउवा सरकारले राज्यकोषबाट कार्यकर्तालाई ८ करोड वितरण गर्दै, किन ?
काठमाडौं - प्रधान मन्त्रिको पद छोर्ने क्रममा देउवा सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट ८ करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको खुलासा भएको छ । सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसअघि ६ कात्तिकमा सरकारले ३ सय १० कार्यकर्तालाई एकै दिन ४ करोड ५८ लाख, ६ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई १० करोड, साउन/भदौमा ४ करोड ७६ लाख वितरण गरेको थियो । अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन् ।